Former Zimbabwe captain Elton Chigumbura announces international retirement, Pakistan series to be his last - Newsbaba
Former Zimbabwe captain Elton Chigumbura announces international retirement, Pakistan series to be his last
The 3rd and final T20I between Pakistan and Zimbabwe will mark the swansong of Zimbabwe’s former captain Elton Chigumbura who has decided to retire from international cricket.
Elton Chigumbura to retire from international cricket on November 10. (AP Photo)
Former captain Elton Chigumbura to retire from international cricketThe 34-year-old Chigumbura led Zimbabwe in 62 ODIs and 18 T20IsThe Pakistan tour, ending on November 10, will be his last
On Saturday, November 7, Elton Chigumbura, 34, announced his retirement from international cricket. The former Zimbabwe captain will hang his boots after the 3rd and final T20I against Pakistan, in Rawalpindi, on November 10.
A part of Zimbabwe’s T20I squad in Pakistan, Chigumbura has an international career spanning 16 years in which he played 213 ODIs with 4340 runs in the format and captained in 62 of them. He also played 55 T20Is and led Zimbabwe in 18 of those, besides also representing the national team in 14 Test matches. With more than 5000 runs across formats, Chigumbura will end his long career as a stalwart of Zimbabwean cricket.
The former captain, who scored a 13-ball 21 against Pakistan in the 1st T20 on Saturday, was also part of the Zimbabwean squad that last toured Pakistan in 2015. The said limited-overs tour was an iconic one since Zimbabwe were the first ICC full member nation to have toured Pakistan since the Lahore attack in 2009.
The right-handed batsman had scored his highest score in ODIs, of 117, and also his top T20I score of 54* in that tour 5 years ago. Zimbabwe had, however, lost both the ODI and T20I series to Pakistan back in 2015. Call it poetic justice that Chigumbura will end his international career in Pakistan and not on his own soil.
Hosts Pakistan are now 1-0 ahead in the 3-match T20I series after a 6-wicket win against Zimbabwe on November 7. Pakistan skipper Babar Azam scored a brilliant 55-ball 82 to inspire Pakistan to a comfortable win against Chamu Chibhaba’s team.